That's so good, right?: January 2017
Posted by Alex Aung at 10:48 AM No comments:
ကျနော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုကိုအမြဲယူဆောင်ပေးလာတတ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကို ပြန်လည်တွေးတောနေမိပါတယ်။ အခုအချိန်နဲ့ ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့။ အသေအချာပြောပါလို့ဆိုလာရင်တော့ မကြာခင် စွန့်ခွာရတော့မယ့် မြို့မအထက်တန်းကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ ဘက်စ်ကက်ဘော ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ သွားအားပေးတဲ့နေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီနေ့က မီနီဘတ်စ်တစ်ခုကိုစီးပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တာကိုလည်း သတိရတယ်။ ဘတ်စ်ကက်ဘောပွဲပြီးမကြာခင်မှာပဲ ခရစ်စမတ် နှင့် နယူးရီးယား ကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်လာတာလည်း သေချာမှတ်မိပါတယ်ဗျ။
ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ အားလပ်ရက်ရနေတော့ အိမ်မှာပဲသောင်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အမေနဲ့ အဖေက ခရစ်စမတ်အတွက် ဈေးဝယ်ထွက်နေကြတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်ကုန်ကာနီးဆိုတော့ ရာသီဥတုက အလွန်သာယာနေတာပါ။ ကျနော်တို့ အိမ်ရဲ့ နောက်ဖေး ဥယျာဉ်ထဲမှာ trampoline တစ်ခုရှိနေတော့ ကျနော့်ညီ ကျော်စွာနဲ့အတူ နေ့လယ်အစောပိုင်းတလျောက် ခုန်ဆွ ခုန်ဆွတစ်ချိန် လုံးလုပ်နေတာ အတော်ကြာတော့ ချွေးတွေကိုရွှဲနေရော။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ အောက်ထပ်က ကွန်ပျူတာမှာ ဂိမ်းကစားနေတဲ့ ညီဖြစ်သူကို ထားခဲ့ပြီး အပေါ်ထပ်တက်ကာ ကျနော် ရေသွားချိုးပါတယ်။
ရေလဲချိုးပြီးရော တကိုယ်လုံးကို ခပ်သွက်သွက်ရေခြောက်အောင် တဘက်နဲ့သုတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီး အ၀တ်လဲဖို့လုပ်လိုက်ပါ တယ်။ boxer ဘောင်းဘီတစ်ထည်ကို ဆွဲဝတ်လိုက်စဉ်မှာသတိထားမိတာက ပေါင်ကြားရှိ ငပဲ အတင်းခေါင်းထောင်ထပြီး မျှော့ကြိုးနဲ့ ဆီးစပ်အကြားကွာနေအောင်လုပ်နေတာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပြီဆိုလျှင် ဘယ်အချိန် ဘာညာ မစဉ်းစားမိတော့သလို ရပ်တန့်ဖို့လဲ မစွမ်းတော့ဘူးဗျ။ ဘောင်းဘီတွေ တီရှပ်တွေကိုပြန်ဆွဲချွတ် တဘက်တစ်ထည်ကို အိပ်ရာပေါ်ဖြန့်ခင်းပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။ မှတ်မိသလောက်တော့ အပြာရောင်မွှေးပွတံဘက်တစ်ထည်ဖြစ်မယ်။ တဘက်အသေအချာပြန့်မပြန့်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ အ၀တ်ဗလာနဲ့ လှဲချလိုက်တဲ့နောက်မှာ လက်ကစားမှုစတင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်အသက်အရွယ်….အဲ…၁၅နှစ်ပြည့်ကာနီးအရွယ် ဖြစ်မယ်။ ဟဲဟဲ record များလုပ်မိရင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး လက်သမားဖြစ်မလားဘဲ ခပ်သွက်သွက်အလုပ်များလိုက်တာ သိပ်မကြာပါဘူး တဘက်ပေါ်မှာ အရည်ကွက်တွေရွှဲကရောဗျာ။ ကောင်ကလေးတွေ အကုန်လုံးလိုလို လက်ကစားတာမကြာသေးတဲ့ ကာလတလျောက် မှာ အရည်များများရွှဲတာကလွဲလို့ ခပ်ပျစ်ပျစ်အရည်တွေမထွက်လောက်သေးဘူးမလား ကျနော်လည်းအတူတူပါပဲ။
တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်လောက် ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ပြီးနောက်မှာတော့ ကံကောင်းစွာပဲအခြားသူတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်တူအချို့ကို ဗဟုသုတ ရလိုက်ပါတယ်။ Grade VIII လောက်မှာစခင်ခဲ့တဲ့ ပီတာဆိုတဲ့ ကောင်လေးလေ သူ့ငပဲဘယ်လိုထွားကြောင်း သူ့ဆီးစပ်မှာ ဘယ်လို အမွှေးထူလာကြောင်း လက်ကစား အာသာဖြေလိုက်တာ အဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေအများကြီးထွက်ကြောင်း ဥက္ကာနဲ့ ကျနော့်ကို လာပြောပြတယ်။ ခန္ဓာကိုထွားကြိုင်းလာတဲ့အဖြစ်ရော သူ့မွေးရာပါပစ္စည်းကြီးမှုကိုရော ဂုဏ်တယူယူရှိသလို လက်ကစားတတ်တာကို လည်း မာန်ထနေသဗျ။ မကြာခင်မှာပဲ ကျောင်းအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ ကျနော်နဲ့ ဥက္ကာကို သူလက်ကစားနေတာ ထိုင်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ငပဲကနေ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေပန်းထွက်တာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာပဲ။ ပီတာက အခြားမြို့ကပြောင်းလာ တဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီး နည်းနည်းတော့ ပိန်သလိုဆိုပေမယ့် သူ့ငပဲကြီးက တကယ့်ကို စံချိန်လွန်ကြီးဗျ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ငပဲကြီးက ထင်ရှားသိသာနေတဲ့ အင်္ဂါပစ္စည်းကြီးဖြစ်နေရောလေ။ သူ့ငပဲက ပုံမှန်မဟုတ်သလိုပဲ ထိပ်အရေပြားက တော်တော်ရှည်သလို လက်နဲ့ နောက်ကိုဆွဲလိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့ ငပဲခေါင်းကြီးကလည်း နီရဲပြီးထောင်နေတယ်။ သူ့ရွှေဥတွေကလုံးဝန်းပြီး ကြီးနေတာများ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ထက်ပိုတယ်ဗျာ။ တွဲတော့ကျမနေဘဲ ငပဲအရင်းနားမှာ တွယ်ကပ်နေသလောက် အမွှေးအမျှင်တော့သိပ်မရှိပါဘူး။
အာ..မဟုတ်ဘူးဗျာ…လက်ကစားမိတဲ့အချိန်တိုင်း အတူတူလိုပဲ….ကျနော် လက်ကစားတဲ့အချိန် ခပ်သွက်သွက်မလုပ်ဘဲ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် လုပ်တာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လေ့လာမိပေမဲ့ပေါ့။ ခြေတံနှစ်ဖက်ကိုကား ငပဲကိုဆုပ်ကိုင် လက်ကစားတဲ့အချိန်တိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားမိ ရင်း Tempo မြင်လာချိန်ဆို ရွှေဥတွေက တင်းကြပ်လာသလို တစ်နေရာရာက နွေးပြီး ကလိကလိဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုကစဖြစ်လာပြီးနောက် အရင်ကနဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်နဲ့အတူ လက်သွက်မှုကို အရှိန်ထိန်းလို့မရတတ်တော့ဘူးဗျ။ အဲဒါ လုပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျနော့်စိတ် ထန်နေချိန်ဆိုရင် နေရာမရွေးသလို ခပ်သွက်သွက်လည်းပြီးသွား ပန်းထုတ်တတ်တော့ အမှတ်မထင် အဖြစ်အပျက်လေးတွေ နည်းနည်း တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။
တစ်ခါတစ်ခါ သွားရင်းလာရင်း ပေါင်ကြားကငပဲ အငြိမ်မနေ ခေါင်းထောင်ထ တရမ်းရမ်းဖြစ်ချင်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ကျနော်သိတယ်။ ငပဲရှိရာလက်ရောက်ပြီး မာနေတဲ့ငပဲကို ဖိညှစ်လိုက်ဖို့မဆိုလိုဘူးနော်။ တနေရာရာမှာ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင် လက်နှစ်ဖက်ကိုခေါင်းနောက်မှာ ယှက်တင်လိုက်ပြီး အဆုပ်ထဲလေကောင်းကောင်းဝင်အောင် ရှူရှိုက်လိုက်တာပါပဲ။ ဒီ trick လေးက ချက်ချင်းတော့မသိသာပေမဲ့ နောက် တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး လေကိုရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တာကို အာရုံစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခဏနေကခံစားချက်နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ အာရုံတစ်ခုကို ရနိုင် ကောင်းပါရဲ့။ အကြိမ်အနည်းငယ်လောက် ကျနော်ထပ်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ လိင်တံအနားကပ်ချင်နေတဲ့ ရွှေဥတွေဟာ တစ်ဖက်တစ်ချက် ပြန်ကွာသွားကြသလို အတင်းရုန်းကန်မှုကြောင့် မျှော့ကြိုးနဲ့ ငပဲကြားဆိုင်းသလိုဖြစ်နေတဲ့ ဆီးခုံမွှေး ခပ်ကွေးကွေးတွေ ဟာလည်း သိပ်မတင်းတော့သလို လိင်တံတစ်ဖက်တစ်ချက်က သွေးကြောကြီးတွေဖောင်းကားလာတာတွေလည်း သေ၀ပ်သွားပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းထဲသွား ဆီးသွားလို့လည်းမရပြန် ပြောခဲ့သလို အသက်ရှူသွင်းထုတ် အာရုံပြောင်းလို့လည်းမရရင်တော့ ဆိပ်ကွယ်ရာ တစ်နေရာ အမြန်ရှာပြီး ရွှေပြွန်ထဲက အရည်တွေထွက်သွားတဲ့အထိ လက်ကစားရတော့တာပေါ့ဗျာ။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ သုက်ရည်ထွက်ဖို့အချိန်တန်လာပြီး ပန်းထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အာရုံကို ကျနော့်ငပဲတလျောက်ကနေ ခံစားသိရှိနိုင် တယ်ပြောရမယ်။ ပထမတော့ ကျနော့်ဗိုက်သားပေါ်ကို အရည်အနည်းငယ်လောက် စီးဆင်းစေမိတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဖြူဖွေးပြီး ပမာဏများတဲ့ နောက်ထပ်ခပ်နွေးနွေးအရည်တွေဟာ ကျနော့်လက်ချောင်းတွေပေါ် အများအပြားရွှဲစေသတည်းဖြစ်သွားတယ်။ များသောအားဖြင့် ညာဘက်လက်ဖြစ်ပြီး အရည်တွေကိုအပြင်ထွက်မသွားအောင်လုပ်တတ်တယ်။ လက်မနဲ့ထိပ်အ၀ကို အသာပိတ်၊ ကျန် လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ထိမ်း၊ ခပ်ဖြည်းဖြည်း အပေါ်အောက် ပွတ်သပ်ကစားလိုက်တယ်။ ချောဆီသဘောလည်းဖြစ် မာတောင့်တာ တဖြည်းဖြည်း ပြန်မပျော့ခင်အထိ ဆိုပါတော့။
လက်ကစားတဲ့အကြိမ်တိုင်း အကျင့်ဖြစ်နေတော့ သုက်ရည်တွေဟာ ဖိအားပြင်းပြင်းနဲ့ အပေါက်ဝကနေပန်းထွက်ဖို့ ကျနော့်ရွှေဥတွေ အောက်က ကြွက်သားတွေဟာ အထက်အောက်လှုပ်ရှားရသလို တုန်ခါမှုတွေလည်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ ကျနော့်တကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်းပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်ခါစေသလို နှုတ်ဖျားကလည်း သက်ပြင်းမောချသံတွေ အော်ညည်းသံတွေပေါ်ထွက်စေတဲ့ ခံစားချက်ကို တကယ် သဘောကျပါရဲ့။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါကတော့ သုက်ရည်စထွက်ချိန်မှာ စိတ်ထဲ ကူကယ်ရာမဲ့သလိုခံစားချက်မျိုး ရင်ထဲဟာတာတာဖြစ်ပြီး ဘယ်နှစ်လျော့မှန်းမသိ သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ဖြစ်တယ်။ ခပ်များများတစ်လျော့ထွက်ပြီးနောက် ငါးကြိမ်လောက် ထပ်ပန်းထုတ်မိ တယ်ထင်သား။ နောက်ဆုံး ပိစိနည်းနည်းလေးတစ်လျော့ပန်းထုတ်ပြီးမှ အဆုံးသတ်တော့တာပါ။
အာ…ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီနေ့ မွန်းလွဲချိန်တန်ုးက ကျနော့်အိပ်ရာထဲမှာလုပ်ခဲ့တာပါ။ အနည်းဆုံး တစ်နာရီခွဲလောက်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာ သေချာတယ် ပိုကြာချင်လည်းကြာခဲ့မယ် ထင်တာပဲ။ လက်မကစားဖြစ်တာ တစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ သုက်ရည်တွေက အပြင် ကိုပန်းထွက်ချင်နေတာ အတံထဲမှာ ယားနေရော။ ပန်းလည်းထွက်ခွင့်ရရော မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုလိုပဲ ခုန်ထွက်ကြတာများ ကျနော့် မျက်နှာပေါ်တွေကော ဆံပင်တွေပေါ်ကော ရင်အုပ်တွေပေါ်ကော ရွှဲအိုင်နေတာပါပဲ တဗြန်းဗြန်း။ ရှိသမျှအကုန်အစင် ပန်းထုတ်နေတာ အချိန်နည်းနည်းဆိုင်းတာကြောင့် အခန်းတံခါးမခေါက်ဘဲရုတ်တရက်ဖွင့်ဝင်လာတဲ့ ကျနော့်ညီ ကျော်စွာရဲ့အပြုအမူအပေါ် အော်လည်း အပြစ်မတင် နိုင်ခဲ့သလို အခန်းတံခါးမပိတ်မိတဲ့အပေါ်မှာလည်း အချိန်မမှီတော့ပါဘူး။ အသက်ပုံမှန်ရှူတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင် အိပ်ရာ ပေါ်မှာ လှဲလျောင်းရင်း ပါးစပ်ကို ဟထားရင်း ကျနော့်လက်ချောင်းတွေဟာ ငပဲကို ကိုင်လျက်အနေအထားရှိနေရင်း လက်တစ်ဘက် ကလည်း ဗိုက်သားပေါ်က သုက်ရည်တွေကို ပွတ်သပ်နေရင်းအခြေအနေဖြစ်နေတာကိုးဗျ။
ကျော်စွာတစ်ယောက် ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ရှေ့ဆက်လည်းမလှမ်းလာပဲ ၀င်လာတဲ့အနေအထားမှာပဲ ရပ်နေတယ်။ သူ့ပါးစပ်က ဘာပြောမလဲ “Wow!! အကိုဘာလုပ်နေတာ!!” လို့ပဲအော်ပြီး အခန်းထဲကအမြန်ပြန်ထွက်ကာ တံခါးကိုဆောင့်ပိတ်သွားပါရော။ သူလည်း အခန်းထဲကထွက်သွားချိန် အသက်လေးပုံမှန်ရှူသွင်းထုတ် ခုတင်ဘေးစားပွဲက တစ်ရှူးဘောက်စ်က တစ်ရှူးတွေကို သတိထား လှမ်းယူလိုက်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံးက သုက်ရည်တွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မကျမိစေရေး သုက်သင်ရပါတယ်။ ဗိုက်ကြွက်သားတွေပေါ်မှာတော့ ခပ်စေးစေးဖြစ်နေတာကြောင့် ပြောင်အောင်ကြိုးစားသုတ်လိုက်ရတယ်။ အိပ်ရာပေါ်ဟိုသည်ကြည့်တော့ သိပ်မတွေ့သလို အထူးသဖြင့် ကျနော့် ဦးခေါင်းပေါ်ကျော်ပြီးကျ မလားထင်မိတာကြောင့် စူးစမ်းကြည့်လိုက်တာ တော်သေးရဲ့ ပေါင်တံနှစ်ချောင်းဘေးက ခင်းထားတဲ့ တဘက် ပေါ်မှာ နည်းနည်းရွှဲနေရုံပဲ။ သက်ပြင်းမောလေးအသာချ တစ်ရှူးစတွေကော တဘက်အဟောင်းကောယူကာ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာ သေချာထား ရေနောက်တစ်ခါပြန်ချိုးသန့်စင်ရပါတယ်။ ဆံပင်တွေကော စိုစွတ်ကုန်တာဆိုတော့ ရှန်ပူနဲ့ ကောင်းကောင်းပြန်လျှော်ရပါတယ်။
ကျနော့်ညီ ကျော်စွာအကြောင်းကရော ဘယ်လိုလဲ? ကျနော်က အသက် ၁၅နှစ်ပြည့်ကာနီးနေပြီဗျ။ သူ့မွေးနေ့က ခရစ်စမတ်ပြီးလို့ သုံးရက် လောက်နေရင်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ တွက်ကြည့်လိုက်ရင် မကြာခင်ရက်အတွင်းမှာပဲ ဥက္ကာ့အသက် ၁၂နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ ကျနော့် အထင် ဥက္ကာသည်လည်း လက်ကစားသည့်အကြောင်း ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အာသာဖြေတဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိ နေလောက် တယ်။ သူ တက်နေတဲ့ အိမ်နားရှိအင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာသင်တန်းက ရွယ်တူကောင်လေးတွေအကုန်နီးပါး အရွယ်ရောက်စပြုနေ တဲ့အရွယ်တွေများတော့ မပြောဘဲမရှိကြ မလုပ်ဘဲမနေကြပါဘူးလေ။ သူ့ဘာသာ ကြိုးစားကြည့် လုပ်ကြည့်မှာသေချာသလောက်ရှိ ပေမယ့် သုက်ရည် ထွက်ဖို့ကတော့ အရွယ်ငယ်လွန်းသေးတာကြောင့် အိပ်မက်စိုတွေမက်ဖို့လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ဒီကောင် အဲ့ဒီ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော့်ကို စကားမဟတော့သလို မေးလည်းမမေး မဆွေးနွေးတော့ ကျနော်လည်း သူ့ကိုမပြောပြဖြစ်ပါဘူး။
ကျနော်နဲ့သူက သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အ၀တ်မကပ်တဲ့အနေအထားမျိုး တစ်ယောက်က မမြင်ခဲ့သောနေထိုင်မှုစရိုက်ကြောင့် ကျနော့်ဆီးစပ်က ကွေးကောက်ကောက် ဆီးခုံမွှေးတွေနဲ့ ကြီးမားထွားကျိုင်းပြီး တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ငပဲကို သူမမြင်ဖူးတော့သလို အမွှေးထွက်ဖို့ အစပျိုးနေတဲ့ သူ့ဆီးခုံနဲ့ ငပဲလေးကိုလည်း ကျနော်မစူးစမ်းတော့တာ အခုအရွယ်ထိပဲပြောရမယ်။ ကျနော် လက်ကစားပြီး အိပ်ရာပေါ်မှာ အ၀တ်မဲ့နေတဲ့ကိစ္စကို မိဘတွေကို သူ ပြန်ပြောတိုင်တောမယ့်အလုပ် မလုပ်ဘူးဆိုတာ အသေအချာပြောရဲပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြန်တက်လို့ မကြာခင် တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်မှာတော့ ကျနော့် BFF စည်သူနဲ့ ဥက္ကာ နှုတ်ဖျားကနေ ကျော်စွာမြင်တဲ့ ကိစ္စ ပြောထွက်လာတာကြောင့် ဦးခေါင်းရုတ်တရက်ကြီးသွားသလို ထိတ်လန့်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မှတ်မိနေရပါရော။ နှစ်ယောက်စလုံး က အဲ့ဒီကိစ္စကို ဟာသကြီးတစ်ခုထင်မှတ်ပြီး ပြောဆိုစနောက်ကြတော့တာကိုးလေ။
Alex Aung (30 December 2016)
Note: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကြုံဆုံတတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို မှီးပြီးရေးပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်အကျယ်၊ဇာတ်လမ်းအကောင်းတွေဖန်တီးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့် ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲ အာသာပြေဖတ်ပေးကြပါဦးနော်။ ကျေးဇူးပါ။
Posted by Alex Aung at 8:43 AM No comments:
ဟိုနေ့က အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူငယ် Volunteer တွေအတွက်ပေးတဲ့ သင်တန်းမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောနေတာလေးကို နားထောင်ရင်း တွေးနေမိတယ်။ အရင်ကလည်း ကြားဖူးပြီးသားအကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေမယ့် ခုမှ သေသေချာချာ စဉ်းစားမိတာ။
Gender လို့ခေါ်တဲ့ ကျားမရေးရာကိစ္စအကြောင်း သူဆွေးနွေးရင်းနဲ့ ပြလိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေက သာမန်အားဖြင့် ယောကျာ်းလား၊ မိန်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ယောကျာ်းလျာလား၊ မိန်းမလျာလား၊ ဒီလိုပဲ အပေါ်ယံလောက် ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်။ ယောကျာ်းဖြစ်ပေမယ့် နွဲ့နေတယ်၊ အလှအပကြိုက်နေတယ်ဆို ဒါ အခြောက်ပေါ့၊ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ယောကျာ်းလေးလို ၀တ်စားထားတယ်၊ ယောကျာ်းလေးလို ပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင် ဒါ ယောကျာ်းလျာပေါ့။
အဲဒီမှာ ထူးဆန်းလာတာက ဘာလဲဆိုတော့ တစ်သက်လုံး ယောကျာ်းလိုနေလာတယ်၊ မိန်းမလည်းရှိတယ်၊ ကလေးတွေလည်း ရနေပြီ၊ စီးပွါးရေးလည်း အကုန်အခြေတကျနဲ့ အဆင်ပြေနေကာမှ လိင်တူဆက်ဆံရတာကို ပိုခုံမင်တယ် ဆိုပြီး အိမ်ထောင်အပျက်ခံပြီး လိင်တူဆက်ဆံသူအဖြစ် လူသိရှင်ကြား ခံယူသွားတဲ့သူတွေ တွေ့လာတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုလည်း ဘောလုံးသမား ဘယ်သူက သူဟာ လိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး ဖတ်လာရတယ်။ သူတို့ဆို ဘယ်လိုလုပ် ကနွဲ့ကလျ ဖြစ်နေမတုန်း။ ကိုယ့်ထက်တောင် သန်မာပြီး ထွားကျိုင်းနေသေးတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ရည်းစားကောင်မလေးလည်းရှိတယ်၊ ယောကျာ်းချင်းလည်း ဆက်ဆံတယ်။ သူတို့ကျတော့ရော ဘယ်လိုတွေလဲ နားလည်ရခက်ခဲ့တယ်။
အမှန်တော့ လူတစ်ယောက်ကို ယောကျာ်းရယ် မိန်းမရယ် ယောကျာ်းလျာ မိန်းမလျာရယ်လို့ပဲ ခွဲပြောလို့မရဘူး။ ကဏ္ဍ(၄)ခုနဲ့ ပြောရမယ်။
၁။ မွေးရာပါ သဘာဝလိင် (Biological sex) ဒါက လိင်အင်္ဂါနေရာနဲ့ ဆိုင်တယ်
၂။ လက်ခံထားမှု (Gender identity) ဦးနှောက်နဲ့ဆိုင်တယ်
၃။ ဖော်ပြမှု (Gender expression) အပြင်ပန်းသွင်ပြင်နဲ့ ဆိုင်တယ်
၄။ တပ်မက်မှု (Sexual orientation) နှလုံးသားနဲ့ ဆိုင်တယ်။
မွေးရာပါ သဘာဝလိင်အရ ယောကျာ်းလား၊ မိန်းမလား၊ လိင်အင်္ဂါ၂မျိုးလုံး ပါသူလား။
သူ့ကိုယ်သူလက်ခံထားမှုအရ သူဟာ ယောကျာ်းလို့ ခံယူထားသလား၊ မိန်းမလို့ ခံယူထားသလား။ ဘယ်လိုခံယူထားရမှန်း မသိတဲ့သူကိုတော့ genderqueer လို့ခေါ်တယ်။
အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်ကိုဖော်ပြထားမှုအရ ယောကျာ်းအဖြစ်နဲ့လား၊ မိန်းမအဖြစ်နဲ့လား၊ ယောကျာ်းလိုလို မိန်းမလိုလိုလား။
လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအရ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို တပ်မက်လား၊ လိင်တူကို တပ်မက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ၂ခုလုံးလား။
မွေးတုန်းက ယောကျာ်းလေးအဖြစ် မွေးလာတယ်၊ သူ့မှာပါတာ ယောကျာ်းအင်္ဂါ။ ယောကျာ်းလို့ပဲ ခံယူတယ်၊ ယောကျာ်းလိုပဲ ၀တ်စားဆင်ယင်တယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် ယောကျာ်းအတိုင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် လိင်တူဆက်ဆံရတာကို တပ်မက်တယ်။
ခုနကပြောတဲ့ ဘောလုံးသမားလိုမျိုး ကျားကျားလျားလျားလည်း ရှိနိုင်သလို ယောကျာ်းလို့တော့ သိနိုင်ပေမယ့် သေချာကြည့်ရင် အလှတွေသိပ်ပြင်ထားတာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ သူတို့ကိုကျ မကြီးဖြိုး တို့ဘာတို့ သွားခေါ်လို့မရဘူး
သူ့ကို Male, man, masculine, homosexual လို့ သတ်မှတ်တယ်၊ လူတစ်ယောက်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ အဲဒီလို info graphic မျိုးကို အခေါ်အဝေါ်အရတော့ Genderbread လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မွေးတုန်းက ယောကျာ်းလေး၊ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးလို့ ခံယူတယ်၊ မိန်းကလေးလိုပဲ ၀တ်ဆင်တယ်၊ ပြောတယ်ဆိုတယ် သုံးနှုံးတယ်၊ လိင်တူဆက်ဆံရတာကို တပ်မက်တယ်။ (အခြောက်ဆိုပြီး လူတွေသိကြတဲ့အုပ်စုတွေ)
သူတို့ကို ပြောဆိုတဲ့အခါ မိန်းကလေးကို ပြောသလိုပဲ ပြောရတယ်။ ညီလေး တို့ ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါ တို့ သွားခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ တချို့ဆိုလည်း မိန်းကလေးတွေတောင် အရှုံးပေးရလောက်အောင်ကို လှတယ်။
(သူ့ရဲ့ Genderbread ကျ Male, woman, feminine, homosexual)
ဒီလိုပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ မိန်းကလေးလို့ပဲ ခံယူတယ်၊ မိန်းကလေးလိုပဲ နေတယ်ထိုင်တယ်၊ ကြိုက်တော့ လိင်တူအချင်းချင်း ကြိုက်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။
(Female, woman, feminine, homosexual)
ဒါကြောင့် ယောကျာ်းလျာ၊ မိန်းမလျာဆိုတာထက် သူဟာ မွေးရာပါလိင်အရ ဘာ၊ ခံယူထားမှုအရ ဘာ၊ ဖော်ပြထားမှုအရ ဘာ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအရ ဘာ ဆိုတာမျိုး ခွဲပြီးမြင်တတ်ရင် သူတို့ကိုနားလည်ဖို့ ပိုလွယ်လိမ့်မယ်။
ထပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာလေးတွေ ရှိလာတယ်။ သူတို့နေရာမှာ ငါသာဆိုရင်ပေါ့။
ယောကျာ်းအဖြစ် မွေးလာသူတစ်ယောက်ဟာ Gender identity အရ မိန်းမလို့ခံယူမယ်၊ Expression အရ မိန်းမလိုပဲ ၀တ်စားဆင်ယင်မယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် လိင်ပြောင်းဖို့ဆိုတာကျ အင်မတန်ခက်တယ်။ အိမ်သာဝင်ရင်လည်း ယောကျာ်းအိမ်သာပဲ သူဝင်ရမယ်။ သူမမြင်ချင်တဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို မြင်နေတွေ့နေရမယ်။ ယောကျာ်းလျာဆိုလည်း ဒီလိုပဲ၊ သူ့မလိုချင်တဲ့ ရင်သားတွေ၊ တင်ပါးတွေကို စွန့်ပစ်လို့ရရင် စွန့်ပစ်ချင်နေလိမ့်မယ်။ ပိန်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မှန်ကြည့်တိုင်း သူ့ရဲ့ ထွက်နေတဲ့ဗိုက်ကို မြင်ရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်ရသလို၊ ထိခိုက်မှုတခုခု၊ မတော်တဆမှုတခုခုကြောင့် မျက်နှာမှာ အမာရွတ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် မှန်မှာမြင်တိုင်း အားငယ်ရသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သူတို့က အဲဒီထက်တောင် ပိုဦးမလားပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ပြင်ဖို့တအားခက်တာကိုး။
Sexual orientation လို့ခေါ်တဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုဆိုတာကလည်း လုပ်ယူလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မိဘက ဘယ်လိုဖိအားပေးပေး၊ ဆူဆူဆဲဆဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်ကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့၊ ပြောင်းသွားဖို့ ခက်တယ်။ အရမ်းကို ဖိအားပေးလွန်းလို့ ထိန်းချုပ်ထားရရင်တောင် အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါ ပွင့်ထွက်လာမှာပဲ။ ကိုယ့်သားဟာ ယောကျာ်းလေးချင်း ချစ်ကြိုက်တဲ့သူ ဖြစ်နေတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်သမီးဟာ မိန်းကလေးချင်း တပ်မက်သူ ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဘယ်လိုအတင်းအကြပ်လုပ်လို့မှ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ လမ်းမှားကိုတောင် ပိုလို့ရောက်စေလိမ့်ဦးမယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ထားစေချင်တယ်။ ကိုယ်သာဆိုလည်း တစ်လောကလုံး ကဲ့ရဲ့နေကြရင်တောင် ကိုယ့်မိသားစုက နားလည်ပေးတာ၊ ဖေးမပေးတာလေးတော့ လိုချင်မိမှာအမှန်ပဲ။
လိင်တူချင်းစုံမက်သူတစ်ယောက်ဟာ ပါရမီထူးတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်၊ အလှဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်၊ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်၊ မိသားစုကို၊ လောကကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုကြောင့် မိသားစုကနေ စွန့်ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြတာမျိုးဟာ အလားအလာရှိတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို အညွှန့်ချိုးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် လိင်တူချင်း တပ်မက်ကြသူတွေကို တန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့သူတွေအဖြစ် မမြင်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။
တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေလည်း ရှိတာပဲ။ ကိုယ့်သားက အခြောက်ဖြစ်နေလို့ မိသားစုက အိမ်ပေါ်ကနှင်ချ၊ လမ်းမပေါ်ရောက်၊ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ပြည့်တန်ဆာဖြစ်၊ ရောဂါတွေရပြီး ဒုက္ခဖြစ်ကြရသူတွေ ရှိသလို၊ အိမ်ကဆူဆဲကြိမ်းမောင်းခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ သူ့အလှပြင်ဆိုင်ရဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ တစ်မိသားစုလုံးကို တင်ကျွေးထားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှ ပုံမှန်လို့ ထင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ၊ လူများစုကလည်း ဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေကို သာမန်လူတွေအဖြစ် လက်ခံပေးကြဖို့၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မပြုကြဖို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီတင်မကပါဘူး၊ ကမ္ဘာမှာလည်း ငြင်းခုန်ကြဆဲ ကိစ္စတစ်ခုပါ။
ကိုယ်က မိန်းမဘ၀ကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်။ နောက်နေ့မနက် မိုးလင်းလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးလှပတဲ့၊ ကိုယ်သိပ်သဘောကျတဲ့ ရင်သားတွေ တင်ပါးတွေမရှိတော့ဘူး၊ အဲဒီအစား ရင်ဘတ်တွေ ခြေသလုံးတွေ ပါးတွေမှာ အမွှေးအမျှင်တွေ ထွက်လာမယ်၊ ယောကျာ်းလိင်အင်္ဂါကြီးလည်း ရှိလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
ယောကျာ်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ အဲဒီမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အဓမ္မလာကျင့်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်က အတင်းအကြပ်စီစဉ်လို့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ၊ လိင်တူချင်းချစ်ကြိုက်ဖို့ အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုနေမလဲ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ Gender identity တို့ sexual orientation တို့ရဲ့ သဘောသဘာဝကို ပိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပဲ LGBT လို့ခေါ်တဲ့ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender တို့ရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း အရင်ထက်ပို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
(မှတ်ချက် - Genderbread ဆိုတာကို အဆင့်ဆင့် update လုပ်လာတာ Version3အထိ ထွက်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံး version မှာတော့ Sexual orientation နေရာမှာ Sexually attracted to နဲ့ Romantically attracted to ဆိုပြီး ၂မျိုးထပ်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတော့ အရမ်းရှုပ်သွားမှာစိုးလို့ Version 1 ကိုပဲ အခြေခံထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် လေ့လာကြည့်လို့ http://guidetogender.com/ လင်ခ့်ကိုလည်း ဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်)